OTU ESI ACHỌTA NJIKỌ NJIKỌTA NA EXCEL - EXCEL - 2019
Chọta ederede okirikiri na Excel
Kọmputa laptọọpụ Hewlett-Packard na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ, mana iji hụ na ha arụ ọrụ na Windows OS, ndị ọkwọ ụgbọala ga-arụ ọrụ n'enweghị ike. N'okwu anyị taa anyị ga-ekwu banyere otu esi eme nke a na ndị nwe HP G62.
Ihe nchọgharị HP search maka G62
Ịnwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala na ngwaọrụ dị na ajụjụ, yana kọmputa kọmputa ọ bụla, n'ọtụtụ ụzọ. N'okwu ọ bụla a kọwara n'okpuru ebe a, ụzọ isi edozi nsogbu ahụ dị iche, Otú ọ dị, n'ozuzu, ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha ga-eme ka nsogbu dowe.
Usoro 1: Nkwado Hewlett-Packard Page
Chọọnụ maka ngwanrọ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ngwaike dị iche iche ma ọ bụ laptọọpụ dum, ọ bara uru ịmalite site na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ. HP G62 abụghị otu n'ime iwu a dị mkpa, ma na ụfọdụ nuances. Nke bụ eziokwu bụ na G62 bụ akụkụ mbụ nke aha ihe nlereanya ahụ, ma mgbe ọ bịara na njirimara dị mgbagwoju anya nke ngwaọrụ nke usoro nhazi nghazi na agba. Ma ọ bụrụ na nke abụọ n'ime anyị adịghị mkpa, mgbe ahụ, nke mbụ bụ ihe na-ekpebi ihe.
Na HP G62 ntinye, enwere ihe karịrị iri dị iche iche ngwaọrụ, ya mere ka ị ghọta ihe nlereanya ị nwere, chọta aha ya na ikpe ahụ ma ọ bụ na ntuziaka onye ọrụ na-abịa na kit. Anyị ga-aga n'ihu ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala.
Gaa na nkwado HP
Njikọ ahụ n'elu ga-akpọga gị na peeji nke Hewlett-Packard, ebe a na-ewepụta kọmpụta niile nke HP G62. Chọta ihe nlereanya gị na ndepụta a ma pịa njikọ dị n'okpuru nkọwa ya - "Software na ndị ọkwọ ụgbọala".
N'otu oge na peeji na-esote, buru ụzọ họrọ sistemụ arụmọrụ, wee dee ya (bit omimi).
Rịba ama: Ebe ọ bụ na a tọhapụrụ laptọọpụ ajụjụ a ogologo oge gara aga, ebe nrụọrụ Hewlett-Packard na-enye ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ maka Windows 7. Ọ bụrụ na HP G62 gị nwere ihe dị ugbu a ma ọ bụ, Kama nke ahụ, ụdị os os ochie, anyị na-akwado iji otu n'ime ụzọ ndị a.
N'ịkọwapụta ozi dị mkpa, pịa bọtịnụ ahụ. "Gbanwee".
Ị ga-ahụ onwe gị na ndepụta nke depụtara ngwanrọ na ọkwọ ụgbọala niile dị na HP G62.
Ihe ọ bụla na-emegide, aha ya na-amalite site na okwu ahụ "Ọkwọ ụgbọala", pịa ntinye aka na aka nri iji hụ ozi banyere mpaghara akụrụngwa. Iji budata ya, pịa bọtịnụ ahụ. "Download".
A ga-arụ ọrụ yiri nke ahụ maka ọkwọ ụgbọala ọ bụla n'ime listi ahụ.
E nwere ntakịrị ndụ hacking - iji ghara ibudata faịlụ dị iche iche, na-eche ihu nke ọ bụla n'ime ha, obere aka ekpe nke bọtịnụ nbudata, chọta akara ngosi maka ịgbakwunye ọkwọ ụgbọala na ihe nkata a na - akpọ nkata - ị nwere ike ibudata ha niile.
Dị mkpa: N'akụkụ ụfọdụ, enwere ihe karịrị otu akụrụngwa software - ịkwesịrị ibudata nke ọ bụla n'ime ha. Ya mere, na ngalaba "Ndịna eserese" nwere ndị ọkwọ ụgbọala maka ihe ngosi vidiyo nke dị iche na nke dị,
na ngalaba "Network" - Software maka netwọk na laptọọpụ laptọọpụ wireless.
Ọ bụrụ na ibudatara ndị ọkwọ ụgbọala niile n'otu n'otu, gaa nzọụkwụ ọzọ nke ntụziaka. Ọ bụrụ na i jiriwo ndụ hacking na anyị atụle ma gbakwunye faịlụ niile na "Ngwa", pịa bọtịnụ-acha anụnụ anụnụ n'elu ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala. "Mepee Ndepụta Ntugharị".
Jide n'aka na ndepụta ahụ nwere components ngwanrọ dị mkpa, wee pịa "Bulite faịlụ". Usoro nbudata amalite, mgbe a ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala niile na laptọọpụ gị. Chere ka usoro a mezue.
Ugbu a na ị nwere faịlụ ị chọrọ, wụnye ha na HP G62 gị.
A na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ dịka ọ na - eji ihe omume ọ bụla - mepee faịlụ ahụ a na - arụ ọrụ site na igodo abụọ ma na - agbaso ọsọsọ nke ọkachamara ahụ wuru.
Mmetụta nke usoro a doro anya - a ghaghị ibudata onye ọ bụla ọkwọ ụgbọala iche iche, wee debe ya na laptọọpụ n'otu ụzọ ahụ. Nke a ga-ewe oge, ọ bụ ezie na n'ozuzu, ọ bụ usoro a kachasị dị nchebe ma dị irè karị, ma ọ nwekwara ihe ọzọ dị mfe karị, yana otu onye ọrụ. Banyere ya ma kwuo n'okpuru ebe a.
Hewlett-Packard, dị ka ọtụtụ ndị na-arụpụta laptọọpụ, na-enye ndị ọrụ ya ọ bụghị naanị ndị otu ọkwọ ụgbọala, kamakwa ọkachamara software. Ndị nke a na-agụnye Enyemaka Nkwado HP - ngwa nke akwadobere iji wụnye ma melite ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka. Ọ bara uru maka HP G62.
Mgbe ịpịrị njikọ dị n'elu, pịa "Download Nkwado Enyemaka HP".
Ozugbo ebudatara faịlụ ntinye ngwa, malite ya site na ịpị abụọ na LMB.
Ọzọ, soro ọkachamara nwụnye,
nke a ga-ejikọta na nke ọ bụla
ruo mgbe e mechara nwụnye ya ma kọwaa ya:
Kwalite HP Nkwado Enyemaaka ma kwado ya, na uche gị ma ọ bụ na-agbaso ndụmọdụ nke ndị mmepe. Mgbe ị kpebisiri ike na nhọrọ nke parameters, pịa "Na-esote".
Ọ bụrụ na enwere ọchịchọ dị otú ahụ, gafee ọzụzụ ngwa ngwa na iji ngwa ahụ, na-agụ ihe ọmụma na ihuenyo na ịpị "Na-esote" iji gaa na slide ọzọ.
Pịa taabụ "Ngwaọrụ m"wee gaa na ngalaba "Laptọọpụ m" (ma ọ bụ "Kọmputa m").
Na window nke ọzọ, pịa njikọ ahụ "Lelee maka mmelite"
ma chere maka iṅomi zuru ezu nke HP G62 gị iji mezue.
Mgbe Onye Nkwado Nkwado HP na-anakọta ozi dị mkpa banyere nhazi nke laptọọpụ ma nyochaa sistemụ arụmọrụ, ndepụta nke ndị ọkwọ ụgbọala na-efu na ndị agafeghị aga ga-apụta na windo dị iche.
Na ngọngọ "Nwelite Nweta" lelee igbe dị n'akụkụ ihe omume ọ bụla, wee pịa bọtịnụ ahụ "Download ma wụnye".
A ga-arụnye ihe niile achọpụtara ma budata ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka, n'enweghị ihe ọ bụla ị chọrọ. Mgbe ịmechara usoro a, ị ga-achọ ịmalitegharịa laptọọpụ ahụ.
Iji Onye Ntanye Akaụntụ HP iji wụnye ma melite ndị ọkwọ ụgbọala na HP G62 bụ ọrụ dị mfe na dị mfe iji mezuo karịa nhọrọ a chọrọ na usoro mbụ. Ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ngwa ngwa bụ eziokwu bụ na ọ ga-agwa gị mmelite dịnụ n'ọdịnihu, ga-enye gị ibudata ma wụnye ha.
Usoro nke 3: Nlekọta ndị ọkachamara
Ị nwere ike iwunye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP G62 na ọnọdụ akpaka ọ bụghị naanị site na enyemaka nke ngwa ngwa. Maka ebumnuche ndị a, nke dabara adaba na ya, ma ọ bụ ihe ngwọta ndị ọzọ site na ndị mmepe nke ọzọ. Dị ka Onye Nkwado Ntanetị HP, ọ bụla n'ime ọrụ ndị a ga-enyocha ngwaike na ngwanrọ nke laptọọpụ, budata ngwanrọ na-efu na mmelite dị mkpa, wụnye ha onwe ha, ma ọ bụ nye ọrụ iji aka ha rụọ ọrụ ndị a. Isiokwu anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ ezigbo ngwa maka nhazi G62.
Gụkwuo: Software iji chọpụta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka
Enwere ihe dị iche iche na-arụ ọrụ n'etiti mmemme a na-enyocha na ihe a, nke mbụ, a gosipụtara ọdịiche dị na njikwa anyị, yana oke nke data ntanetịaka na ngwaike akwadoro. Iduzi dị ka njirisi ndị a bụ DriverMax na DriverPack Solution, anyị na-akwado ha ka ha gee ntị.
Ịwụnye ma na-emelite ọkwọ ụgbọala site na DriverMax
Esi eji DriverPack Solution chọọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Ngwaọrụ ọ bụla n'ime laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, nke ịchọrọ ịkwọ ụgbọala, nwere nọmba nke ya - ID. Ihe nchọpụta ngwa ngwa ahụ, nke kachasị mkpa, bụ aha pụrụ iche, ọbụna karịa onwe ya karịa aha nlereanya. N'ịmara ya, ịnwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala "ezigbo ngwaike" kwesịrị ekwesị, nke ọ ga-ezuru iji rịọ maka enyemaka site na otu n'ime ụlọ ọrụ weebụ pụrụ iche. Maka ama ndị ọzọ gbasara ebe ịchọta ID na otu esi eji ya mechaa wụnye software na HP G62, akọwapụtara na otu isiokwu dị iche na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala site ID
"Onye njikwa ngwaọrụ"Ejikọtara ya na nsụgharị niile nke Windows, ị nwere ike ọ bụghị naanị na-ele ngwa ngwa nke kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ, ma na-ejekwa ozi ya. Nke a pụtara na nyocha na ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala: usoro nyochaa ha na nchekwa data ya ma tinye ya na akpaghị aka. Uru nke usoro a bụ enweghị mkpa ibudata mmemme ma gaa na weebụsaịtị dị iche iche, enweghị mmeghe bụ "Dispatcher" anaghị achọta mgbe niile ọkwọ ụgbọala ọhụrụ. Mụta otu esi eji sistemụ arụ ọrụ iji hụ na arụ ọrụ nke "ígwè" nke HP G62 n'isiokwu na-esonụ:
Gụkwuo: Nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na "Njikwa ngwaọrụ"
N'isiokwu a, anyị kwuru banyere ụzọ ise dị iche iche iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na HP G62. N'agbanyeghị eziokwu bụ na laptọọpụ a abụghị nke mbụ ọhụụ, iji hụ na arụmọrụ ya na gburugburu Windows OS adịghị ka ọ siri ike. Anyị na-atụ anya na ihe a bara uru nye gị ma nyere aka ịhọrọ ngwọta kachasị mma maka nsogbu dị ugbu a.